किन नेताहरुको घर–घर चाहार्दै छन् विप्लव ? « Sansar News
५ श्रावण २०७८, मंगलवार १३:३६
साउन ५, काठमाडौं । लामो समय निष्क्रिय देखिएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ एकाएक सक्रिय देखिएका छन् । गठबन्धन नेतृत्वको सरकार निर्माण भएको भोली पल्टैदेखि विप्लवको सक्रियता बढेको हो ।
उनले यसबीचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ र एमालेको पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरुलाई उनीहरुकै निवासमा पुगेर भेटेका छन् । विप्लवले मंगलबार मात्रै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनकै निवास बालकोट पुगेर भेटेका छन् ।
कसको निवासमा कहिले पुगे विप्लव ?
– असार ३० मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटार
– असार ३१ मा माधवकुमार नेपाल निवास कोटेश्वर
– साउन १ मा डा. बाबुराम भट्टराई निवास टोखा
– साउन २ मा मोहन वैद्य ‘किरण’ निवास बानियाटार
– साउन ४ मा एमालेको पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरुसँग उनकै निवासमा
– साउन ५ मा केपी शर्मा ओली निवास बालकोट
किन नेताहरुका घर–घरमा पुग्दैछन् विप्लव ?
नेकपा नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले बताएअनुसार तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको ३ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न विप्लवसहितको टिम नेताहरुको घर–घरमा पुगेको हो । नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले बताएअनुसार ०७७ फागुन २१ मा तत्कालिन सरकारसँग भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन् । उनका अनुसार उक्त सम्झौताअनुसार नेकपाका नेताहरु अझैसम्म पनि रिहा हुन सकेका छैन् ।
बास्तोलाले बताएअनुसार नेकपाका १३० भन्दा धेरै नेता तथा कार्यकर्ता अहिले पनि जेलमा छन् ।
‘प्रचण्ड, माधव र बाबुराम जीहरु सत्ता गठबन्धनमा भएको हिसाबले हामीले मुलतः तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषय राखेका छौं, छलफलमा हाम्रो मुख्य एजेण्डा यहि नै हो’, संसार न्यूजसँग बास्तोलाले भनेका छन्, ‘अहिले पनि हाम्रा थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई रिहाई गर्ने सहमति कार्यान्वयन भएको छैन् ।’
उनका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे नेकपाले आफ्नो धारणा सबै दलका नेताहरुसँग राख्ने योजनाअनुरुप पनि भेटघाट गरिरहेको छ । नेता बास्तोलाले बताएअनुसार राजनीतिक अन्यौंलताका निकासका लागि नेकपाले अघि सारेका एजेण्डाका विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।
तर, भेटवार्ताप्रति विप्लवकै पार्टीभित्र असन्तुष्टी
विप्लवले पछिल्लो एक साताको बीचमा विभिन्न ६ महत्वपूर्णंं भेटवार्ता गरेका छन् । उनले एमालेको पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरुलाई पनि उनकै निवासमा पुगेर भेटेका छन् ।
तर, विप्लवले भेटेको यो भेटवार्ताप्रति उनकै पार्टीभित्र भने असन्तुष्टी देखिएको छ । विप्लव नेकपाका एक नेताका अनुसार विप्लव एजेण्डा बिनै नेताहरुसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन् ।
संसार न्यूजसँगको कुराकानीमा पनि नेता धमेन्द्र बास्तोलाले लामो समयसँग भेटघाट नभएको भन्दै अपडेटका लागि भेटवार्ता गरिएको बताएका थिए । तर, उच्च तहमा भएको यस्तो भेटवार्तामा एजेण्डा नहुँदा विप्लव स्वंय भने ‘फोस्रो’ देखिएको टिप्पणी उनकै पार्टीभित्र छ । नेताहरुको घरमै धाएर भेट्ने विप्लवले तरिकाले नेकपा राजनीतिक रुपमा थप कमजोर ठहरिएको उनीहरुको बुझाई छ ।